संसारभर लोकप्रिय कौवा र मयूरको कथा, जसले तपाइँको आँखा खोलिदिनेछ,…. – पुरा पढ्नुहोस्……
संसारभर लोकप्रिय कौवा र मयूरको कथा, जसले तपाइँको आँखा खोलिदिनेछ,….
यो कथाले निकै राम्रो शिक्षा दिएको छ । कौवा सोच्थ्यो हाँस सबैभन्दा खुसी छ, हाँसलाई लाग्थ्यो म त के हो र त्यो सुगा पो खुसी छ, उता सुगा मयूरको सुन्दरता देखेर मोहित थियो । उसलाई मयूर नै सबैभन्दा खुसी छ जस्तो लाग्थ्यो ।
तर मयूरको नजरमा कौवा सबैभन्दा खुसी थियो । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने अरुसँगको तुलनाले आफूलाई सधैँ दु:खी तुल्याउँछ । त्यसैले आफूसँग जे छ त्यसमा खुसी हुन सिक्नुहोस् । सारा समस्या र पीडाहरु विस्तारै हल हुँदै जानेछन् ।
Prevकेपी ओलीको गर्जन नेपालको सिमा मिचिएको हामीलाई मान्य हुदैन (भिडियो सहित)
Nextराजनीति त्यागेर कृषिमा : जो कागती खेतीबाट बने करोडौंको मालिक (हेर्नुहोस यस्तो छ कृषिले बदलेको जिन्दगी )
आफ्नो पुर्वप्रेमी सुशान्तलाई बि’दा गर्न पुगिन् कृति सानोन…
अष्टमि गुरुङको आत्महत्याको मुद्दा फैसला सकियो ..
बिक्रमको अबस्था झन् ग,म्भीर भएपछि नायिका एलिजा पुगिन सहयोग लिएर,गाउँलेले पैसा फिर्ता मागेपछि रु,वाबासी भिडियो सहित